Maareynta Sumcadda oo leh Radian6 | Martech Zone
Thursday, April 9, 2009 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Webtrends ku dhawaaqay iskaashi muhiim ah oo lala yeesho Radiyoo6 at the Webtrends Hawlgal 2009 Shirka. Laga soo bilaabo goobta Radian6:
Saameynta warbaahinta bulshada ee xiriirka bulshada iyo xayeysiinta ayaa aasaas ahaan bedeleysa xirfadda. Lahaanshaha calaamaduhu mar dambe maahan uun magaca hay'adda. Summad ayaa hadda lagu qeexay wadarta dhammaan wada sheekaysiga ka dhex dhaca dadka isticmaala wayna dhacaysaa iyadoo aan loo eegin inaad ka mid tahay wada hadaladan iyo in kale.
Radian6 wuxuu diirada saarayaa dhisida xalka kormeerka iyo falanqaynta dhameystiran ee PR iyo xirfadlayaasha xayeysiinta si ay u noqdaan khabiiro kujira baraha bulshada.
Isku waafajinta Analytics sumcadduna aad ayey muhiim ugu tahay baraha bulshada. Suuqgeeyayaasha khadka tooska ah intabadan waxay sameeyaan khalad ah inay aaminaan in wadada rajada ee noqoshada macaamiil ay tahay markay ka deggaan boggaaga ama bartaada internetka. Arrintani haba yaraatee ma jirto… waddadu waxay ka bilaabmaysaa halka ay dadku kaa helaan. Tani waa badanaa matoorada raadinta laakiin aaladaha bulshada sida Twitter, shabakadaha bulshada, iyo bogagga calaamadaha bulshada ayaa noqonaya ilo kale oo sii kordhaya ee rajada.
Wadashaqeynta Webtrends ee Radian6 waa bedel ciyaarta ee warshadaha. Qirashada 'Webtrends' ee kaqeybgalka qadka iyo habsami u socodka iyo khariidad loogu talagalay in lagu daro kuwa ku jira barxaddooda ayaa ah bidhaamaysa mustaqbalka Web Analytics. Wax soo saarka Radian6 aad ayuu uga duwan yahay booska maaraynta sumcadda, waxay diiradda saarayaan la socodka warbaahinta bulshada, cabirka iyo hawlgelinta. Sidoo kale, waxay leeyihiin interface aad u fiican oo adeegsade ah!
Radian6 waxay ogaatay dhibaatada - kooxaha suuq geynta kama qeyb gali karaan wadahadal kasta oo khadka tooska ah ah - sidaa darteed waxay dejiyeen nidaam markasta oo shirkadaada, wax soo saarkaaga ama adeegyadaada la soo hadal qaado, saameynta ilaha loo isticmaalo mudnaanta iyo howlaha la bilaabay loona xilsaaray inay si dhaqso leh uga jawaabaan labadaba iyo si wax ku ool ah.
Tags: chris newtonchris ramseyradian6maaraynta sumcadkormeerka warbaahinta bulshada
Aad baad ugu mahadsantahay muujinta muuqaalkan iyo ogeysiiskan. Aad ayaan ugu faraxsanahay suurtagalnimada iskaashiga aan la leenahay Webtrends; iyadoo lala socdo dhaqdhaqaaqa wanaagsan xagga qiyaasta iyo cabbiraadda isgaarsiinta bulshada, waxay noqon doontaa mid waligeed muhiim ah inaan leenahay gorfayn qoto dheer iyo istiraatiijiyado waxqabad oo waxqabad leh oo ka soo baxa dadaalladeenna kormeerka.
Waxaan rajeyneynaa inaan awood u siineyno shirkado badan oo dheeri ah inaynaan maqal oo aan aragno waxa laga sheegayo iyaga khadka tooska ah, laakiin aan fahamno sida taasi ganacsigooda u waddo ugana qaybgasho khadka tooska ah ee siyaabaha runta ah iyaga iyo macaamiishooda.
Agaasimaha Bulshada | Radiyoo6